Wasaarada Arrimaha Dibadda UAE ayaa tilmaantay inay sii wadi doonaan gurmadka ay u fidinayaan dadka ay saamaysay abaarta ka jirta Somalia, kuwaasi oo u dhimayanaya gaajo, harraad iyo nafaqo darro.
"Argagaxisada nagama weecin doonaan inaan u gargaarno Shacabka Soomaaliyeed ee xilliga wajahaya abaarata, una baahan kaalmada bini'aadanimo," Ayaa lagu yiri qoraal kasoo baxay Wasaarada Arrimaha Dibadda ee Imaaraadka Carabta.
Waxay ku celisay UAE balan-qaadkeeda ah inay caawiso dowladda iyo Shacabka Somalia.
Wax khasaaro ah kama soo gaarin Shaqaalaha Bisha Cas ee Imaaraadka qaraxii miino ee Arbacadii lagu qaadey Kolonyo ay la socdeen oo ka baxay Muqdishu, kuna jeeday Barakacayaasha duleedka Muqdishu.
Safiirka Somalia u fadhiya Imaaraadka Abdulkadir Al Hatimi ayaa ugu baaqay caalamka inay si deg deg ah gargaar bini'aadanimo u gaarsiiyaan Somalia, si loo badbaadiyo nolosha dadka ay ku dhufatay abaarta.
Imaaraadka oo qaaday qayb kamid ah daawacyadii Zoobe [Sawirro]
Dowladda Imaraadka Carabta ayaa maanta Muqdisho ka qaaday qaar ka mid ah dadkii ku dhaawacmay qaraxii 14 October ka dhacay Isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho caasumadda Soomaaliya...